Toeram-piaramanidina lehibe indrindra eto an-tany hatsangana eto Florida
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany any amin'ny habakabaka » Toeram-piaramanidina lehibe indrindra eto an-tany hatsangana eto Florida
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Fizahan-tany any amin'ny habakabaka • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fotodrafitrasa dia haorina ao amin'ny Launch and Landing Facility (LLF) ao amin'ny Merritt Island, Florida ary ahitàna folo mihantona sy mihantona nahantona afaka mamokatra karazana fiara an'habakabaka an'arivony isan-taona.
Ny governoran'i Florida Ron DeSantis dia nanambara fa 300 tapitrisa dolara no hampiasain'i Terran Orbital any Florida.
Ny fotodrafitrasa Terran Orbital 660,000 toradroa dia hamorona asa vaovao manodidina ny 2,100 any Florida.
Ity tranokala ity no toerana fanaovana orinasa mpamokatra habakabaka “Indostria 4.0” lehibe indrindra sy mandroso indrindra.
Terran Orbital, orinasan-vahaolana amin'ny zanabolana, fiaraha-miasa amin'ny Space Florida, aerospace Florida sy ny fahefana eo amin'ny sehatry ny fivelaran-tsambo, dia faly nanatevin-daharana androany niaraka tamin'ny governoran'i Florida, Ron DeSantis rehefa nanambara ny fivoaran'ny drafitrasan'i Terran Orbital momba ilay toerana "Indostria 4.0" lehibe indrindra sy mandroso indrindra eto an-tany. toeram-pamokarana fiara. Ny fotodrafitrasa dia haorina ao amin'ny Launch and Landing Facility (LLF) ao amin'ny Merritt Island, Florida ary ahitàna folo mihantona sy mihantona nahantona afaka mamokatra karazana fiara an'habakabaka an'arivony isan-taona.
Ny foibe mirefy 660,000 metatra toradroa dia hanasongadina rojom-pifanarahana voafehy AI mifototra amin'ny campus ahafahan'ny Terran Orbital mitazona ny lazany malaza amin'ny fanomezan-toky ny misiona sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Io fotodrafitrasa io dia hirehareha ihany koa amin'ny teknolojia fanontana 3D sy famokarana fanampiny hamela ny fandefasana fiara an-habakabaka haingana eny an-tsena, ary koa ny fahafaha-mamokatra sy mamorona kalitao avo lenta, avo lenta amin'ny teknolojia, fivorian'ny birao misy pirinty vita amin'ny valizy fitehirizana elektronika. Ho fanampin'izany, ny toerana dia hampiasa andalana vokatra ho an'ny mpiasa sy mpiasa manampy hamokarana fitaovana elektronika sy mekanika sarotra be.
"Faly aho milaza fa hampiasa vola mitentina 300 tapitrisa dolara amin'ny Space Coast i Terran Orbital hananganana trano famokarana zanabolana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao," hoy i Governora DeSantis. "Ny famokarana satelita dia mbola ho ampahany lehibe amin'ny toekarena ao amin'ny Space Coast, ary amin'ity fanambarana ity dia manandratra avo hatrany isika. Any Florida izahay dia hanohy hitarika amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa, hampiofana mpiasa mahay sy hitandrina toe-karena ara-toekarena ahafahan'ny orinasa toa an'i Terran Orbital mivoatra. Miarahaba azy ireo aho noho ny fanapahan-kevitra lehibe tonga tany Florida. ”
“Faly izahay miara-miasa aminy Space Florida hanangana fotodrafitrasa heverinay ho fananam-pirenena: fandraisana anjara ara-bola amin'ny indostrian'ny habakabaka nasionaly. ” hoy i Marc Bell, mpiara-manorina ary tale jeneraly an'ny Terran Orbital. "Tsy vitan'ny hoe afaka manitatra ny fahaizantsika mamokatra izahay mba hihaonana amin'ny fitomboan'ny fangatahana ny vokatray, fa hitondra ihany koa ny fahafaha-manao sy ny fahafaha-manao fiara fitaterana an-habakabaka mankamin'ny Fanjakan'ny Florida, mampiasa vola mitentina 300 tapitrisa dolara amin'ny fanamboarana sy fitaovana vaovao. Amin'ny faran'ny 2025, hamorona asa vaovao manodidina ny 2,100 isika amin'ny karama 84,000 $. ”
"Space Florida miarahaba an'i Terran Orbital tamin'ny fifidianany an'i Florida sy ny Launch and Landing Facility ao amin'ny Kennedy Space Center (KSC) ho an'ny orinasa mpamokatra zanabolana vaovao, "hoy ny filoha lefitry ny Space Florida, Frank DiBello. “Ity fanambarana ity dia teboka iray hafa amin'ny fitarihan'i Florida amin'ny varotra eny amin'ny habakabaka, manolotra fivoarana manankarena, ao anatin'izany ny fanombohana fangatahana sy ny fahaizan'ny satelita-amin'ny-fangatahana ao amin'ny seranam-piaramanidina. Manantena ny fahombiazan'i Terran Orbital izahay amin'ny taona ho avy sy ny hetsika mitohy sy ny fitomboana any Florida ”